Puntland oo ka jawaabtay eed loo jeediyay Siciid Deni | KEYDMEDIA ONLINE
Puntland oo ka jawaabtay eed loo jeediyay Siciid Deni
Wasiirka Qorsheynta Qaranka, Jamaal Maxamed Xasan, ayaa eed kulul u jeediyay Madaxweyne Deni, halka Madaxtooyada Puntland ka jawaabtay eedda wasiir Jamaal.
MUQDISHO, Soomaaliya - Wasiirka Qorsheynta Qaranka ee Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Jamaal Maxamed Xasan ayaa weerar afka ah ku qaaday Madaxweynaha Dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullahi Deni, wuxuuna ku eedeeyay inuu faragalin ku hayo doorashooyinka dalka.
Wasiir Jamaal, wuxuu xusay in Siciid Deni, uu dib u dhigayo ku dhawaaqidda murashaxnimadiisa, si uu saameyn weyn ugu yeesho Baarlamaanka soo socda, wuxuuna ugu baaqay inuu faraha kala baxo guddiyada doorashooyinka, kana baxo dhuumashada.
“Iyadoo Saciid Deni uu daahiyay ku dhawaaqida musharaxnimadiisa si uu saameyn ugu yeesho una xakameeyo doorashooyinka ka dhacaya Puntland, odayaasha beelaha, wakiilada iyo musharaxiinta baarlamaanka ayaa dhamaantood muujiyay walaac aad u weyn oo ku saabsan heerka ay gaarsiisan tahay, cagajugleynta iyo faragalinta uu ku hayo doorashada” ayuu yiri Wasiir Jamaal.
Dhanka kale, afayeenka Puntland, Jaamac Dabaraani, oo ka jawaabayay hadalka Wasiirka Qorshaynta, ayaa Jamaal, ku eedeeyay inuu isku dayayo suurad xumeynta maamulka iyo madaxda Puntland.
“Waa nasiib-daro inaad isku daydo inaad sawir xun ka bixiso Puntland iyo dadkeeda, Taariikhda ayaa is qoreysa", ayuu yiri Af-hayeenka Puntland, Jaamac Dabaraani.
Dani, ayaa la rumeysan yahay inuu yahay musharrax dhakanaya, wuxuuna ka mid ahaa u tartamayaashii xilka Madaxweynaha Soomaaliya 2017, markaas oo uu helay 18 cod.
Wasiiir Jamaal oo ah Xildhibaan uu kursigiisa yaallo Puntland ayaa ka mid ah xildhibaanno taabacsan Farmaajo oo shaki weyn ka qaba soo laabashadooda.